Solitaire 6.4.1.3381 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.4.1.3381 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
MobilityWare အားဖြင့် Solitaire က Android device များအတွက်မူရင်း Solitaire ဂိမ်းပါ!
Android အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Solitaire ကစား သန်း 100 ကျော်အသုံးပြုသူများသည် Join! Solitaire ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဗားရှင်းအခမဲ့နှင့် Play Store မှာလူကြိုက်အများဆုံးပါ! သစ်တစ်ခု Solitaire အတွေ့အကြုံကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ကိုယူပါ။ ယခု Android ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုဂန္ Solitaire ကဒ်ဂိမ်းကစားရန်ယခု Download!
MOBILITYWARE အင်္ဂါရပ်များဖြင့် SOLITAIRE:
ဂန္ထဝင် Klondike & စိတျရှညျ Solitaire ၏ပျော်စရာစွဲအားကစားပြိုင်ပွဲ
♠ 1 နှင့်ဆွဲသို့မဟုတ်ဂန္ Klondike Solitaire Play နှင့်3ကတ်များဆွဲ
တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့ Challenge အားကစားပြိုင်ပွဲ & သော့ဖွနယူးစိန်ခေါ်မှုများ Play
♥စိန်ခေါ်မှုများ solitaire ၏ဂန္ဂိမ်းကိုစောင့်ရှောက်တိုင်း Times New
♥ထူးခြားတဲ့, စိန်ခေါ်မှုဂိမ်းနေ့တိုင်းအခမဲ့ Play!
ဂန္ထဝင်ဂိမ်းများ, မော်ဒန် Options ကို
♣စာရင်းအင်း tracker: သင်၏တိုးတက်မှုနှင့်ကစားစတိုင်လေ့လာ
♣ကဒ်များ & ဇယားအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
♣အဘယ်သူမျှမ wifi ကျပန်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်အဘို့လိုအပ်သည်။ အခမဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို Play!
♣အဆိုပါ Navigation Bar ကို (အထကျက Android 4.4 သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်) ကိုအသုံးချရန်ကြောင်းပစ္စည်းတွေအပေါ် Menu ကိုနှင့်အခြေအနေဘား Remove
multiplayer & ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ
မိတ်ဆွေများကိုဆန့်ကျင်ပြိုင်ပွဲနှင့်အမြန်ဆုံးပြီးသွားတဲ့သူကိုမြင်ရ: ♥သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Play!
သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ထိုနေ့ရက်သည်များအတွက်သရဖူကိုဖို့နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုဖြေရှင်းနိုင်။ ပိုပြီးသရဖူအနိုင်ရသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီလဆုဖလားရယူနိုင်သော! ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများ Play နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် Solitaire!
Facebook ပေါ်မှာအမေရိကန် LIKE
premiumapp စတိုး 1.27k 948.84k
APK ဗားရွင္း 6.4.1.3381
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.mobilityware.com/privacy-policy.php
File Size: 84.71MB
Release date: 2019-07-11 23:22:56
လက်မှတ် SHA1: F5:63:BB:74:84:27:22:7C:E7:34:FF:3D:5E:E9:9B:8F:FF:DC:50:0C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): MobilityWare
အဖွဲ့အစည်း (O): MobilityWare